San Diego မှ Comic-Con ၂၀၁၇: Stranger Things Netflix panel live stream - Netflix သတင်း
San Diego မှ Comic-Con ၂၀၁၇: Stranger Things Netflix panel live stream
အကြွေး: သူစိမ်းများ - Curtis Baker - Netflix
HBO: 'Game of Thrones' ဒါရိုက်တာသည်အရွယ်အစား၊ ရာသီ7ပြီးဆုံးမှုအတိုင်းအတာကိုအတည်ပြုသည် ယခုအပတ်တွင်ကြည့်ရှုရန် Netflix တွင်အကောင်းဆုံးပြပွဲ ၅ ခု - Ozark, College မှသူငယ်ချင်းများနှင့်အခြားအရာများ
Netflix ရဲ့နောက်ဆုံး panel က San Diego ရုပ်ပြ-Con 2017 မှာ Stranger အရာများ panel ကိုယနေ့ဖြစ်ပျက်နေသည်! ဒီနေရာတွင်သင် panel ကိုညှိခြင်းနှင့် stream နိုင်ပုံကိုပါပဲ။
အဆိုပါသွန်းနှင့်ဖန်တီးသူ သူစိမ်းများ များအတွက် San Diego မှရုပ်ပြ -Con 2017. အတွက် Netflix က panel ကိုမှလာနေကြသည် သူစိမ်းများ 3:15 p.m. မှာစတင် Comic-Con ရှိ Hall H မှစနေနေ့တွင် PT ။
အဖွဲ့ကို ဦး ဆောင်။ အင်တာဗျူးများစွာရှိသင့်သည် သူစိမ်းများ ငါတို့သွန်းနှင့်အတူမြင်သည်အတိုင်းသွန်း အံ့’s ခြင်း The Defenders မနေ့က။
ကျနော်တို့ကနေကြီးတွေအမှုအရာမျှော်လင့်နေကြသည် သူစိမ်းများ panel က။ ယခုအချိန်အထိ Netflix မှအထူးကလစ်တစ်ခုကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် သေမင်းမှတ်တမ်း, အသစ်တစ်ခုကိုနောက်တွဲယာဉ် တောက်ပ ထံမှကောင်းသောပစ္စည်းပစ္စယတစည်း အဆိုပါ Defenders နှင့် အပြစ်ပေးသူ။ ဒါဟာကျနော်တို့ကတစ် ဦး ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် peek ဖြစ်စေရသဘာဝကျပါတယ် သူစိမ်းများ ရာသီ2သို့မဟုတ်ရာသီများအတွက်ကြောက်မက်ဘွယ်အသစ်ကနောက်တွဲယာဉ်။
ဤသည် SDCC မှာ Netflix ကများအတွက်နောက်ဆုံး panel ကိုဖြစ်ပါတယ်။ တင်ပြလာသောသတင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးသည် Netflix ကိုလာမည့်နှစ်တွင်ဖိတ်ကြားလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
San Diego Comic-Con အစီအစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Netflix သတင်းနှင့်သင်လိုက်နာနေကြောင်းသေချာပါစေ။ ကျနော်တို့အင်တာဗျူးများ, trailers နှင့်အများကြီးအပါအဝင်အချို့သောကြီးမြတ်ပစ္စည်းပစ္စယနှင့်အတူပုံမှန်မွမ်းမံနေကြသည်။
ဖတ်ရမည်SDCC 2017 မှအားလုံး Netflix ကသတင်း
ကံမကောင်းစွာဖြင့် Hall H သည်ရုပ်ပြဥယျာဉ်ရှိ live အခန်းများကိုခွင့်မပြုသည့်အခန်းတစ်ခန်းဖြစ်သည်။ အခြေခံအားဖြင့်တော့ဒီဖြစ်ရပ်ရဲ့သီးသန့်ဖြစ်အောင်ထားဖို့လိုတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါတို့ဟာ Stranger Things panel ကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်လို့ရလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး။ သင်ထိုသို့ပြုလုပ်နိုင်လျှင်အောက်ပါလင့်ခ်နှစ်ခုမှတစ်ဆင့်သင်လုပ်နိုင်သည်။
Stranger Things Netflix panel မှတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သောသတင်းအချက်အလက်များ
အချိန် - ၃း၁၅ နာရီ PT
ရက်စွဲ - စနေနေ့၊ ဇူလိုင် ၂၂ ရက်
တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်း: Stream 1 , Stream 2
များသောအားဖြင့်၎င်းတို့ကိုအပြီးသတ်ပြီးနောက်နာရီအနည်းငယ်အတွင်းတွင် panel များကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်ထုတ်လွှင့်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင် panel ကိုမြင်နိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုရှိသည်။ သငျသညျယခုနှစ် SDCC ကျော်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်နှင့်အတူအဆင်ပြေဖြစ်သင့်သောမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
သတိရ သူစိမ်းများ ရာသီ2ကိုအောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်တွင် Netflix တွင်ပြသပါမည်။ ဒါကြောင့်ဖြန့်ချိအဖြစ်ငါတို့ရာသီအသစ်နှင့်ပတ်သက်။ သတင်းများနှင့်မှတ်စုများအားလုံးပါလိမ့်မယ်။
နှလုံးရာသီ 12 လွှတ်ပေးရန်ရက်စွဲ usa
လမ်းလျှောက်သေလွန်သောသူတို့သည်ရာသီ2netflix
ဘယ်တော့ riverdale ၏နောက်ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပါတယ်